Dambudziko reZuva repasi ratove ratoonekwa pane mamwe maApple Watch | Ndinobva mac
Mazuva mashoma apfuura takataura nezvekuuya kwedambudziko iri kune vashandisi veiyo Cupertino kambani yakangwara wachi uye ikozvino vamwe vashandisi vatotanga kugamuchira chiratidzo chepamutemo cheiyi dambudziko rekudzidzisa pane zvavo zvishandiso. kweSvondo inotevera Kubvumbi 22.
Iyo yakawanda mienzaniso yekuzvipira kweApple kune zvakatipoteredza inowanzo kuratidzwa pawebhu, mune zvigadzirwa zvayo, zvishandiso zvekare, muzvitoro ne akasiyana ekurovedza matambudziko avanotsvaga kwemazuva akadai. Izvo ndezve kuita maminetsi makumi matatu ekudzidzira kuti uwane nyowani yekubudirira uye zvitambi zvinoenderana nezuva racho.
Mune ino kesi chinhu kune wese munhu uye chero munhu ane iyo Apple Watch uye anoda kutora ichi chiitiko anogona kuzviita pasina matambudziko. Kuti uwane izvi, chero rudzi rwekudzidziswa kwemaminitsi makumi matatu kana kupfuura inofanirwa kuitwa. Paunenge wapedza, menduru pamwe nekubudirira uye zvinamirwa zveMessage application zvinobva zvangoerekana zvaitika pane yedu iPhone. Mune ino kesi, iwo magadzirirwo akasarudzwa ekubudirira ndiwo iwo atinoona pamusoro pemitsara iyi: hwindimiri, chiratidzo chinoshandiswazve, uye muridzi chirangaridzo menduru Zuva reNyika 2018.
Parizvino uye pachangu kutaura, handina dambudziko rinowanikwa pane yangu iPhone, asi izvi zvakajairika uye mumaawa mashoma anotevera ndine chokwadi chekuti ichaonekwa. Izvi zvinogona kuve chinhu chinoitika kune anopfuura rimwe, saka dzikama kana usina dambudziko riripo, nekuti rinozopedzisira raonekwa rakachengeteka muApple app> Chiitiko> Zviitwa, pamwe nezvimwe zvese zvabudirira zvaunenge uinazvo, asi mune ino isina ruvara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dambudziko reZuva repasi ratove ratoonekwa pane mamwe maApple Watch
Macbook trackpad isiri kushanda kana uine mbeva yekunze? Heino mhinduro